महिलाले सेक्स गर्ने कारणहरु! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
महिलाले सेक्स गर्ने कारणहरु!
ओएस नेपाल काठमाडौं फाल्गुन २१ – सामन्यतया यौन मानिसको लागि उमेर अनुसार एउटा प्राकृतिक चाहाना हो । तर महिला र पुरुषको यौन चाहाना भने फरक फरक रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। ।उनीहरुको यो अनुसन्धानले महिलाले सेक्स गर्ने २३७ वटा कारण रहेको निष्कर्स निकालेका छन् । सो अनुसन्धानमा महिलाले शारीरिक, भावनात्मक र बस्तुगत कारणले सेक्सका लागि पहल गर्छन् ।
केही महिलाले रेपको डरले त केही त माँया पाउन पनि आफुले सेक्सका लागि पहल गर्ने गरेको बताएका थिए । ‘पैसा, आफ्नो प्रवद्धर्न, लागूऔषध, बदला लिन, आफ्नो केटा साथीलाई जेलस बनाउन पनि महिला सेक्समा सहभागी हुने गरेको पाइयो,’ अनुसन्धानकर्ता मेस्टन भन्छन् ।एक महिलाले टाउको दुख्ने समस्याबाटछुटकारा पाउनका लागि सेक्स गर्ने गरेको बताएकी थिइन् ।अनुसन्धानका क्रममा एक महिलाले आफुले सेक्स गर्ने कारण आफ्नो लोग्नेको स्पर्म बाहीर निकाल्नु मात्र रहेको बताएकी छन् ।
अनुसन्धानमा सहभागी गराएका अधिकांश महिलाले पुरुष प्रति यौन आकर्षण नहुने बताएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा मेस्टन र बसले बिभिन्न देशका एक हजार ६ महिलाको अन्तर्वार्ता लिएका थिए । अन्तर्वार्तामा महिलाले सेक्स गर्ने फरकरफरक कारणहरु बताएका थिए ।१० जना महिलाले गिफ्ट पाउने लोभमा सेक्स गर्ने गरेको बताएका थिए । केही महिलाले डिनरका लागि त केहीले सपिङका लागि सेक्स गर्ने गरेको खुलासा गरेका थिए ।
अनुसन्धानमा सहभागी भएका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १० मध्ये ६ महिलाले ब्याफ्रेण्डभन्दा बाहीरका पुरुषसंग पनि सेक्स सम्बन्ध राख्ने गरेको बताएका थिए । यी मध्ये केहीले आफ्नो सेक्स परफमेन्स राम्रो बनाउन परपुरुषसंग सेक्स गर्ने गरेको बताएका थिए ।यो अध्ययनमा सहभागी महिलाले अग्लो पुरुष मन पर्ने अधिकांशको भनाई थियो ।
एक महिलाले आफ्नो यौन रोग सार्न पनि सेक्स गर्ने गरेको बताएकी थिइन् । केहीले पुरुषको सुगन्ध मनपराएर सेक्समा सहभागी हुने गरेको बताएका थिए ।
एजेन्सी । भारतीय चर्चित नायिका उर्मिला मातोंडकरले जब ‘चाइना गेट’ फिल्ममा उनले ‘छम्मा छम्मा’ गीतमा
एजेन्सी । दिवंगत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतकी कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्ती फरार भएको समाचार बाहिरिएका
महामारीमा मजदुरका गीत गाएर रातारात हीट भए यि र्‍यापर
हरिवंश आचार्यको दाबीः ‘गाईजात्रे क्यासेट बेचेरै दुइटा घर बनाएँ’
काठमाडौं । आज गाईजात्रा । हास्यव्यंग्य अभिनेता हरिवंश आचार्यका लागि समृद्ध जीवनको महत्वपूर्ण दिन हो